Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Iker Casillas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno an'ny mpiambina ny tanjona amin'ny solon'anarana "Ny Masina". Ny tantaranay Iker Casillas Childhood Story Plus Ny zava-misy marina momba ny tantaram-pitiavana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoana nampianarany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany manokana, ny zava-misy ao amin'ny fianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany mamokatra be dia be. Na izany aza dia vitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Iker Casillas izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, Iker Casillas Fernandez dia teraka tamin'ny 20th ny volana 1981 tao amin'ny Community Community of Madrid, Espaina. Izy no voalohany tamin'ireo ankizy roa nateraky ny reniny, Maria del Carmen (mpanety iray) ary ny rainy, Jose Luis Casillas (mpampianatra).
Iker Casillas ray aman-dreny Jose sy Maria. bola: GImage.
Ny teratany Espaniôla avy amin'ny fototse fotsy sy ny fototeny Eoropeana dia natsangan'ny ray aman-dreniny tao an-tanànan'i Bilbao tany Espaina nandritra ny volana vitsivitsy talohan'ny nipetrahan'ny fianakaviany tany amin'ny toerana nahaterahany tao Mostoles.
Iker Casillas dia nobeazina be tany amin'ny toerana nahaterahany tany Mostoles. bola: RTVE.
Nipoitra tao Mostoles niaraka tamin'ny zandriny lahy - Unia Casillas, i Young Casillas dia tsy nanana kiraro na toeram-piaviana ho an'ny tantaram-pianakaviany. Izy dia zazakely ara-drariny izay teo amin'ny faha-efatra taonany, nanofy ho lasa mpiandry fitia.
Nandritra ireo taona taorian'izany, i Casillas dia nitifitra fiara isaky ny nandamina ny lalao baolina kitra teo amin'ny manodidina azy ny namany ary matetika niaraka tamin'ny rainy mba hijery ny klioban'ny tovovavy - Athletic Bilbao - dia milalao ao amin'ny kianja Real Madrid.
Sary manjaka an'i Iker Casillas izay nitifitra nandritra ny lalao baolina kitra teo amin'ny manodidina azy. bola: RTVE.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny làlam-pampianarana Iker Casillas dia ahitana ny fianarany any amin'ny sekoly Picasso any Mostoles. Ny fialamboly voatifitra nianatra tao amin'ny sekoly hatramin'ny taona 5th talohan'ny nandrosoany tany amin'ny sekoly Vicente Aleixandre tao Mostoles.
Tamin'ny fotoana niainan'i Casillas tamin'ny taona 9-10, nahita adihevitra momba ny fanatanjahantena ny ray aman-dreniny mikasika ny fampiharana ny academy football Real Madrid. Nalain'ny rain'i Casillas ho any Santiago Bernabeu izy noho ny fitsapana sy fitsapana izay nandalo. Izany no nanombohan'ny fanorenana an'i Camillas tamin'i Real Madrid.
Sarin'ny Iker Casillas nandritra ny taona voalohany niaraka tamin'i Real Madrid. bola: RTVE.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana sy ny lalana mankany amin'ny tantara
Raha tao amin'ny Real Madrid, i Casillas dia nitombo tsy mitsaha-mitombo avy amin'ny alika sy zanaka ho an'ny fizarazarana ny tanora, fa tsy ny fahaiza-manao fotsiny, fa amin'ny fitondran-tena matotra indrindra indrindra ny fifehezana sy ny fahamatorana amin'ny fampiofanana.
Casillas dia niantso ny ekipa ekipa Real Madrid nandritra ny lalao ligy ligy manohitra an'i Rosenborg fony izy zokiny 16 tamin'ny volana novambra 1997. Na izany aza, dia nijanona ho mpisolo toerana tsy ampiasainy izy nandritra ny lalao.
Iker Casillas dia 16 taona monja raha nantsoina ho ekipa zokiny Real Madrid izy. nahazoan-dalana: RTVE.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Mitsangàna mba haka tantara
Nifindra tany i Casillas, nandany ny fotoan'ny ekipa Real Madrid's C, izay nanampy tamin'ny fandresena ny kaomity ofisialy, fivoarana iray izay nahita azy ho fanantenana ho an'ny mpilalao baolina voalohan'ny klioba.
Ny taona manaraka (1999) dia tena tsara tokoa ho an'i Casillas izay nandresy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny ekipa nasionaly Espaniôla ary nanao ny laharam-boninahitra voalohany amin'ny ekipa Real Madrid tao La Liga sy ny Ligin'ny Champions. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Iker Casillas no lahasa voalohany tamin'ny ekipan'i Real-Madrid tao 1999 ary lasa mpitarika goavana voalohany mpilalao baolina nandritry ny folo taona mahery. bola: RTVE.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Iker Casillas dia lehilahy manambady toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Mampahafantatra anareo ny momba ny tantarany sy ny fiainam-pianakaviana izahay. Tamin'ny voalohany dia nanomboka ny fiarahan'ny Espaniola Model Eva González ao amin'ny 2005 ny fiatoana. Ireo vorona mahafatifaty izay naneho ny firaiketam-pon'ny vahoaka nandritra ny telo taona mahery dia lasa nandeha tamin'ny fomba samihafa tamin'ny volana 2008. Tsy nisy zanaka lahy na vavy no teraka avy amin'ny fifandraisan'izy ireo.
Iker Casillas dia nomena an'i Eva Gonzalez teo anelanelan'ny 2005-2008. bola: Whosdatedwho.
Ny fifandraisana manaraka dia nahita an'i Casillas nanana endrika amam-pitiavana tamin'ny mpandraharaha Espaniola, Ana Medinabeitia sy ny modely Espaniola, Ariadne Artiles rehetra tamin'ny taona 2009.
Casillas dia nanana satroboninahitra nifanaovan'i Ana (havia) sy Ariadne tao amin'ny 2009. bola: Whosdatedwho.
2010 no taona nanombohan'i Casillas nampiaraka tamin'ny vadiny Sara Carbonero. Ny fifandraisana dia naharitra nandritra ny 5 taona talohan'ny nanambadiany tamin'ny 20th of March 2016. Manana ankizy roa ny mpivady. Anisan'izy ireo i Martin (teraka 3rd Jan 2016) sy Lucas (teraka 2nd Juni 2016).
Sary farany an'i Iker Casillas miaraka amin'i Sara Carbonero. bola: Getty Images.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Iker Casillas dia manana antokom-pianakaviana antonony. Mampahafantatra anao ny zava-misy momba ny fiainam-pianakaviany izahay.
Momba ny rain'i Iker Casillas: Jose Luis dia ny rain'i Casillas. Ny mpampianatra sy ny raim-pianakaviana dia teraka sy lehibe tao Bilbao izay nandany ny fahazazany sy ny fahatanorany. Jose dia akaiky an'i Casillas izay nilalao baolina kitra nandritra ny fiainany teo aloha. Nanao fanambarana ho an'ny baolina kitra ihany koa izy ireo ary na dia teo ho eo aza dia nidina iray tapitrisa € 1.2 tapitrisa (£ 1 tapitrisa) satria tsy adino i Casillas hamoaka ny valiny marina nambanin'ny rainy. Na dia izany aza, i Casillas dia nanatontosa ny fahaverezany tamin'ny rakitsoratry ny baolina fandaka mahaliana sy ny vokatra.
Iker Casillas miaraka amin'i José Luis rainy. bola: Getty Images.
Momba ny reny Iker Casillas: Maria del Carmen dia renin'i Casillas. Izy dia niasa ho an'ny mpanety iray tamin'ny fotoana nahaterahan'i Casillas, asa iray izay nifaneraserany tamin'ny fikarakarana tokantrano. Ny renin'ny roa izay tia baolina kitra toy ny vadiny sy ny zanany dia mpankafy ny Athletico Bilbao ary nanaraka ny fiarahamiasany an'i Casillas, nanolotra azy fanohanana an-dreniny raha mila izany izy ary miteny manohitra ny fitsaboana tsy ara-drariny mihatra aminy.
Iker Casillas miaraka amin'i Maria reniny. bola: Getty Images.
Momba ny sakaizan'i Iker Casillas: Tsy manana anabavy i Casillas saingy rahalahy iray antsoina hoe Unia Casillas. Tahaka an'i Casillas, dia be mpankafy be fitiavana i Unai, saingy tsy nisy fitaovam-piadina toy ny zokiny lahy, na tsy nahomby tamin'ny fahombiazany tamin'ny baolina matihanina, satria izy no mpilalao baolina afovoany ho an'ny CD Mostoles.
Iker Casillas miaraka amin'ny rahalahiny Unai. Sary: Facebook.
Momba ny fianakavian'i Iker Casillas: Lavitry ny fianakaviamben'ny fianakaviamben'i Casillas tsy dia fantatra loatra momba ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany lava tahaka ny nenitoany, dadatoa sy ny tsy fantatra. Tahaka izany koa, manana ray aman-drenibe sy raibe sy renibeny izy ary tsy fantatra amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'ny fotoanany hatramin'ny fahazazany. Izany toe-javatra izany ihany no mandeha eny ambonin'ny solaitrabe ho an'ny zanak'anabaviny, ny zanaky ny zanak'olo-mpiray tam-po.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Ny fiainan'ny tena manokana
Inona no mahatonga an'i Iker Casillas hanamarika ?. Mialà sasatra rehefa mitondra ny mombamomba ny toetran'i Casillas ianao mba hanampy anao hahazo sary feno azy. Voalohany aloha, Casillas persona dia tandindonin'ny Taurus zodiac manintona fa izy dia manamboninahitra mendri-kaja sy olona mendri-pitokisana.
Ankoatra izany, manana fahatsapana mahatsikaiky sy tsotra izy, izay miharihary isaky ny manambara vaovao momba ny fiainany manokana sy manokana. Casillas dia tia sy mahaliana ny mahita filma, mihantona amin'ny namana sy ny fianakaviana. Amin'ny maha-antitra iray azy, tsy dia liana loatra amin'ny lalao video izy, anisan'izany ireo izay mifandray amin'ny hetsika fanatanjahan-tena.
Iker Casillas dia tia mitongilana amin'ny namana sy ny fianakaviana. Credit: Instagram.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana momba ny fiainana
Iker Casillas dia manana lanjany mihoatra ny $ 20 tapitrisa toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Ny niandohan'ny hareny dia avy amin'ny vola miditra na karama noraisina nandritra ny roa taona niasana tamin'ny baolina kitra tamin'ny Real Madrid, FC Porto ary ny ekipam-pirenena espaniola.
Noho izany, ny mpilalao baolina kitra dia miaina fomba fiaina mahafinaritra izay hita mibaribary eo amin'ny lamim-pihenany sy ny fananany lafo vidy. Anisan'izany ny tranon'izy ireo tsara tarehy niparitaka manerana an'i Espana sy ny fiaran-dry zareo fiara tsara indrindra ahitana ny Audis, BMW sy Range Rovers.
Fijery iray momba ny trano sy fiara Iker Casillas. Sary: Youtube.
Mba hamenoana ny tantaram-pitiavan'i Iker Casillas momba ny fahazazana eto dia misy zavatra tsy fantatra na tsy dia fantatra loatra izay tsy dia hita ao anatin'ny bio.
Iker Casillas tsy misy tatoazy. Na dia efa nipoitra sigara aza izy dia tsy nahita trondro nisotro.
Iker Casillas mifoka sigara. Credit: Twitter.
Niresaka momba ny fivavahany i Casillas, ary teraka ho Katolika Romanina. Ny mpiandry varavarana dia tsy niala tamin'ny lafiny ara-pivavahana momba ny fanabeazana azy satria mbola Katolika izy tamin'ny fotoana nanoratana.
Ny fanesoana vato izay tsy misy tantara amin'ny ratra goavana na ny aretina dia nanohina ny mpankafy rehefa nolazaina fa nahazo aretim-po na aretim-po izy nandritra ny fotoam-pampianarana miaraka amin'i Porto tamin'ny 1st of May 2019. Nirohotra avy hatrany tany amin'ny hopitaly izy ary nitatitra fa ora maromaro taty aoriana.
Iker Casillas dia miorim-ponenana aorian'ny famelezana ny fo. Credit: Instagram.
Ny mpankafy dia efa nanahy mikasika ny fanavaozana momba ny fahasalaman'i Casillas izay tsy azo alaina ho toy ny aretina iray fotsiny. Ankoatra izany, ny fanafihan'ny foza ao Casillas dia manandratra ny tahotra ny fisotroan-dronono tsy misy hatak'andro raha jerena ny hoe efa ho ny 38 taona izy. Mandritra izany, ireo mpankafy dia mandefa hafatra fankasitrahana amin'ny mpitifitra izay maniry ny hanarenana azy tanteraka.
Iker Casillas Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Video Summary
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'i Iker Casillas Childhood Story momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.